Iza moa i Bre Tiesi mampiaraka? Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny fiainany feno fitiavana amin'ny taona 2022 - Fialam-Boly
Iza moa i Bre Tiesi mampiaraka? Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny fiainany feno fitiavana amin'ny taona 2022
Bre Tiesi's ny fitiavana ankehitriny dia hita eto. Maherin'ny antsasaky ny tapitrisa mpanaraka ny Instagram no Bre Tiesi, kintan'ny media sosialy malaza. Ao amin'ny tranokalany, mandefa horonan-tsarimihetsika fanazaran-tena sy vitsivitsy amin'ireo fomba fanamboarana vegan azy manokana izay novolavolainy manokana izy.
Maro ireo marika fanta-daza no nanakarama azy, anisan'izany ny Ciroc, Revolve ary Ethika. Niseho tamina fizarana Wild'N Out vitsivitsy ihany koa i Bre. Amin'ny maha-bonus azy, ny kintan'ny haino aman-jery dia mpankafy fitsangatsanganana ary efa nitety firenena manerana izao tontolo izao.
Ny fanambadiany tamin'ny kintan'ny NFL Johnny Manziel dia niafara tamin'ny tantara an-tsary taorian'ny fisarahana izay nahasarika ny sain'ny media bebe kokoa. Noho ny naman'i Tiesi nanao lanonana fisaraham-panambadiana an'i Bre, dia nanao fety ny vadiny taloha. Tao anatin'ny fifanolanana dia nilalao haingana ny kintan'ny media sosialy.
Mba hankalazana ny fahatongavan'ny zanany voalohany, ny bilaogera ara-batana sy ny kintan'ny media sosialy Nick Cannon dia nampiantrano lanonana manambara ny lahy sy ny vavy. Misy lafiny maro amin'ny fifandraisan'i Bre Tiesi, koa andao hojerentsika tsirairay.
Iza moa i Bre Tiesi mampiaraka?
Bre Tiesi dia nanambady mpilalao NFL taloha Johnny Manziel , izay niara-niandry ny zanany voalohany izy izao. Talohan'ny fanambadiany Nick Cannon , Bre Tiesi dia nanambady an'i Johnny Manziel, mpilalao NFL, izay andrasany ny zanany voalohany. Tamin’ny taona 2016 no nifankahita voalohany, dia nifamofo ny taona nanaraka, araka ny filazan’izy mivady. Nifanao voady mariazy izy mivady tamin’ny taona 2018. Nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny fanambadian’izy ireo tamin’ny taona 2019 izy ireo taorian’ny fotoam-pantanterahana fohy.
Taorian'ity fanambarana ity dia nambara fa nilaza i Bre fa nandika ny fifanekena tamin'ny fanambadiana i Johnny. Ankoatry ny hoe nanohy niseho tamin'ny hafatra mivantana avy amin'ny vehivavy hafa izy, dia nilaza ihany koa izy fa tsy nanaiky ny fialan-tsiny intsony izy. Noheverin'i Bre ho fomba iray hafa ny fampitsaharana ny fijalian'ny olona iray.
Efa namarana tamim-pilaminana ny fifandraisan’izy roalahy teo aloha taorian’ny fifamaliana maro. Raha ny marina dia nisaotra an'i Tiesi ny quarterback NFL teo aloha noho ny fanampiana azy nandritra ny fotoan-tsarotra teo amin'ny fiainany. Araka ny voalazan'i Bre, dia nifanaraka tsara izy ireo. Taorian'ny fisaraham-panambadiana dia nanao fanehoan-kevitra hafahafa tao amin'ny media sosialy ilay kintan'ny media sosialy, izay nofafana taty aoriana.
Izany rehetra izany dia momba ny fiainan'i Bre Tiesi. Araho hatrany ny fanavaozana bebe kokoa ary mariho ny tranokalanay ho an'ny vaovao bebe kokoa. Misaotra Mamaky!
Hijery vaovao MORE:
Batwoman vanim-potoana faha-4: Daty famoahana: voamarina sa nofoanana?
Tsaho momba ny fiainana mampiaraka sy ny fifandraisany : pelaka ve i Richard Madden?
MANANA ZANAKA ve i ASAP ROCKY? Nipoaka ny fiainan'ny fianakavian'ny Rapper taorian'ny fanambarana nataon'i Rihanna
Miomàna amin'ny Clid The Snail amin'ny lalao fitsangatsanganana mahafinaritra!
lisitra id mozika manokana roblox
sarimihetsika maimaim-poana tsy misy sonia ny
reddit tranokala streaming maimaim-poana tsara indrindra
fampiharana finday youtube ho mp3
mijery sarimihetsika an-tserasera kalitao maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana